Dambudziko re "Kutanga gore nerutsoka rwerudyi" rinoonekwa | Ndinobva mac
Dambudziko re «Kutanga gore pagumbo rerudyi» rinoonekwa
Vese vashandisi vane Apple Watch vanofanira kunge vaine dambudziko rekutanga kwegore 2020 rinowanikwa paApple Watch. Mune ino kesi, sezvakaitika gore rapfuura, iyo Cupertino kambani inoratidza kuti isu titange gore nevhiki yekupedzisa mhete, hongu, vhiki imwe yekupedzisa yega yega yega Activity mhete.
Icho chinetso chinonakidza kwazvo kubatanidza mushandisi kwevhiki kusvika ita mhando dzese dzekurovedza muviri, kufamba, kumhanya, kuchovha bhasikoro kana chero chaunoda. Nenzira iyi isu tichatanga gore kutsoka yekurudyi uye nekupisa mashoma nougat nevamwe izvo zvinogara zvakanaka.
Pane iyo Apple Tarisa uye iyo iPhone dambudziko rave kutooneka
Kana iwe ukatarisa muchikamu cheApple Watch yako kana mukati meiyo iPhone mune Zvekuita, iwe unowana pasina kupenda iro dambudziko rakarongedzerwa neApple kutanga uku kwa2020. kubva pazuva rimwe chete Ndira 1, 2020 kusvika 31 yemwedzi mumwe chete isu tichava nenguva yekutora bheji iri nematanho anoenderana nekutumira mumessage yedu.
Zvinogara zvakanaka kurovedza muviri uye nzira yakanaka yekukochekera pazviri ndeyokupedza mhando dzematambudziko idzo dzinokurudzirwa naApple, hazvidi kuita marathon kure nazvo, ingoita rumwe rudzi rwekurovedza muviri kusvikira tapedza zvindori uye izvi zvinogona kutikochekera kuti tifambe, kumhanya kana kunyange iyo yoga, nezvimwe ... Idzi matambudziko ndiwo atinonyatsoda uye tinotarisira kuti rinouya gore rino Apple ichataura zvimwe zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko re «Kutanga gore pagumbo rerudyi» rinoonekwa
Iyo inotakurika mbiri mbiri skrini yeMacBook yako